Wada-hadalladii heshiis kordhinta ee u dhexeeyay Barcelona iyo Ousmane Dembele oo hakad galay – Gool FM
(Barcelona) 06 Juun 2021. Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya inay qaboobeen wada-xaajoodkii u dhexeeyay kooxda Barcelona iyo xiddigeeda Ousmane Dembele kuwaasoo heshiiska loogu kordhinayay laacibka garabka ka ciyaara.
Qandaraaska uu Dembele ku joogo Camp Nou ayaa dhici doona xagaaga dambe ee 2022, waxaana Barca ay ka cabsi qabtaa inay xagaaga dambe xiddigan ku lumiso qaab bilaash ah haddii ay ku guuleydarreysato inay heshiis cusub ka saxiixato.
Wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegay in Barcelona oo dooneyso sii heysashada xiddiga Faransiiska ah ay la dhibaatooneyso inay qandaraas cusub ku qanciso Dembele, taasoo shaki badan gelineyso mustaqbalka xiddigan maadaama laga bilaabo 1-da bisha June ee sanadka 2022 24-jirkan xor u noqon doono inuu heshiis horudhac ah la gaaro kooxdii uu doono si uu bilaash ugu biiro xagaaga dambe.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay wakiillada Dembele go’aansadeen inaysan miiska wada hadalka soo fariisan inta uu ka dhammaanayo tartanka Euro 2020 si xiddigan uu u helo kooxo qaab ciyaareedkiisa ku qanco oo heshiisyo muhiim ah usoo bandhigaan.
Si kastaba ha ahaatee, Laacibkii hore ee Borussia Dortmund ayaa haatan taageere weyn ka heysta macallinka iyo maamulka Blaugrana kuwaasoo doonaya inay sii heystaan kaddib markii uu qaab ciyaareedkan wanaagsan ku dhammeystay fasal ciyaareedkii hore, iyadoo ay xusid mudan tahay inay Barcelona xagaagii hore ku dhowaatay iibinta laacibkan, balse haatan kooxda reer Spain ayaa baddeshay qorshaheeda ku aaddan Ousmane Dembele.
Manchester United oo ka cabsi qabta inay weyso Marcus Rashford bilawga xilli ciyaareedka dambe... (Maxay tahay sababta?)